दमाहा ढुंगो रोएको देखेर विप्लवका नेता केन्द्रीय जनसरकार प्रमुख सन्तोष बूढामगर अचम्मित – JanaSanchar.com
दमाहा ढुंगो रोएको देखेर विप्लवका नेता केन्द्रीय जनसरकार प्रमुख सन्तोष बूढामगर अचम्मित
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष ३, मंगलवार) १३:०९
जनयुद्धका महान शहीदहरु बिजय बाँस्तोला र संकल्प पोखरेलले शाहत प्राप्त गरेको स्थल कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ साविक अर्मला गाविस वडा नं. ६ टाँडीबिसौनीस्थित अन्नपूर्ण मावि नजिक रहेको जंगलमा पुगेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एव. केन्द्रीय जनसरकार प्रमुख सन्तोष बूढामगर घटनास्थल नजिकै रहेको ठूलो ढुंगो रोएको देखेर अचम्मा परे ।
पार्टीको मध्य पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड ईञ्चार्ज समेत रहेका नेता बुढामगर पार्टीले पोखरामा आयोजना गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका थिए । त्यसै क्रममा उनी २०६१ साल असार १६ गते तात्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी हत्या गरेका महान शहीदहरु बिजय बाँस्तोला र संकल्प पोखरेलले शाहत प्राप्त गरेको स्थल अर्मलाको अन्नपूर्ण मावि नजिक रहेको जंगलमा पुगेका थिए । उनले स्थानीय बासिन्दा र शिक्षकहरुसँग त्यस घटनाका बारेमा जानकारी पनि लिएका थिए ।
घटनास्थलको निरीक्षणपछि फर्कने क्रममा नजिकै रहेको दमाहा ढुंगो बारेमा सुनेका नेता सन्तोष बूढामगर त्यस ढुंगाको बारेमा जानकारी लिन कौतुहल देखिए । फुलपाती अक्षता राखेर प्रार्थना गरेपछि त्यस ढुंगामा अर्को सानो ढुंगाले हिर्कायो भने त्यो ढुंगा रुन्छ र दमाहा जस्तै गरी दम दम गरी बज्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको विश्वास छ ।
फुलपाती र पूजाआजामा विश्वास नगर्ने भौतिकवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सन्तोष बूढामगरले पूजाआजा, फुलपाती नचढाई त्यस ढुंगामो एउटा सानो ढुंगो खोजेर हिर्काए । त्यतिबेला न त त्यो ढुंगो रोयो, न दम दम गरेर दमाहाको जस्तो आवाज नै आयो ।
त्यो दृश्य हेरिरहेका अन्नपूणै माविका विद्यार्थीहरु हाँसे । उनीहरु मध्ये एकले ”फूलपार्ती चढाएर पुजा नगर्ने हो भने ढुंगा त रुन्न ।“ भने । त्यसपछि तिनै विद्यार्थीहरुलाई बोलाएर ढुंगाको रहस्य बारे बताउन आग्रह भयो ।
उनी आए । पूजा गर्न उनले फुलपाती खोजे पाएनन् । फुल नभै नहुने उनको जिकिर थियो । तैपनि उनले पाती चढाएर प्रार्थना गरे र त्यस ठूलो ढुंगामा सानो ढुंगाले हिर्काए । त्यति बेला पनि न त त्यो ठूलो ढुंगा दम दम गरेर बज्यो, न आँसु झारेरै रोयो ।
त्यसपछि नेता सन्तोष बूढामगर आफैं त्यस ठुलो ढुंगाको भित्तामा सानो ढुंगाले हिर्काउन थाले । केही समय उनले यो क्रम जारी राखे । तर ढुंगा रुँदा पनि रोएन र दम दम गरेर बजेन पनि । उनले आफ्नो कार्यलाई जारी राखे ।
सानो ढुंगाले हान्ने क्रममा उनले त्यसभन्दा पहिला हानिएको दागहरु देखे र त्यहीं. ट्वाक ट्वाक गरेर सानो ढुंगाले हानिरहे । केही बेरपछि त ृउनी छक्क परे । ढुंगाले हानेकोभन्दा तल सानो ओढार परेको ठाउँमा पानीको थोपा देखियो । उनले अचम्म मान्दै भने, “ढुंगा त रुँदो रहेछ ।” त्यति मात्रले उनको चित्त बुझेन । उनले त्यो पानीको था्ेपालाई औंलोले चोपेर मुखमा राखेर चाटे पनि । “नूनिलो हुँदो रहेछ” भन्दै उनले थुके पनि । हिर्काउँदा रुने त्यस ढुंगाको बारेमा वैज्ञानिक कारण खोजिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले शहीदहरुको शाहदतस्थलमा स्मारक बनाउने र दमाहा ढुंगाको महत्वलाई दर्शाएर त्यस स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने सकिने धारण राखे ।
उनले घटनास्थलको नजिकै रहेको अन्नपूर्ण माविको आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था बारे जानकारी लिएका थिए ।
(२०७५ पुष ३, मंगलवार) १३:०९ मा प्रकाशित